Ny famatsiana ny fametahana an-tokantrano ao an-trano: ny fitsipika isan'andro, ny fomba fanaovana sakafo sy fitsaboana amin'ny trano fatoriana mandritra ny fahavaratra, amin'ny toeram-pambolena fiompy ary amin'ny toe-javatra hafa, mampiasa vary aram-barona rehefa voatazona - Poultry farming - 2019
Ahoana no fomba handaminana ny famatsian-tsoavaly hahazoana vokatra tsara?
Ny fambolena atody ho an'ny tantsaha maro dia orinasa azo antoka sy mahasoa.
Ireo mpivady amam-bolana sy ny tantsaha dia manangona andian-jiolahy mba hanomezana atody vaovao. Ny hasarobidin'ny atody ambony dia mitaky fangatahana tsy tapaka ho an'ity vokatra mahasalama ity.
Ny vokatra amin'ny fametahana havia dia miankina amin'ny fepetra ny fisamborana, ny fahafenoan'ny sakafo, ny hatsaran'ny sakafo.
Maro ny olona liana amin'ilay fanontaniana hoe: ahoana ny fomba hanomezana sakafo ny akoho mba hahatonga ny haikitry ny atody haharitra mandritra ny taona iray manontolo?
Tandremo ny soso-kevitra momba ny sakafo, ny fomba famokarana sakafo hohanina, ny kalitao sy ny quantitative ny sakafo.
Fomba fandefasana havoana
Sakafo amin'ny ririnina
Ho an'ny famokarana zezika tsara ho an'ny akoho sy ny lanjan'ny sakafo atody, dia ahitanao karazana karazan-tsakafo ao amin'ny fihinanana akoho.
Arovy ny tanjaky ny akorandriaka.
Ny fitrandrahana mineraly dia kalsa, akorandriaka, vatosokay, entana fosifasa, sira sira. Esory tsara izy ireo. Ny fitrandrahana mineraly dia mifangaro amin'ny voamaina, nanampy ny mash.
Proteinina - fitaovana fanorenana ho an'ny vatan'ny akoho. Ny proteinina dia manome ny famokarana zavamaniry sy biby.
Ny proteinina fambolena dia hita ao amin'ny:
sakafo sy mofomamy;
Ny karnavaly voarakitra ao anaty:
trondro sy sakafom-bolo.
Torohevitra: Aza akofa aok'izany hohanina miaraka amin'ny sakafon'ny trondro. Afaka manandrana tsiro ratsy ny atody.
Mameno ny famatsiana vitamina, mampitombo ny fiarovana ary ny isan-jaton'ny fiarovana ny akoho.
ravinkazo vaovao amin'ny fahavaratra ary ny loto maina amin'ny ririnina;
katsaka sy kesika.
Ity karazan-tsakafo ity dia ahitana voankazo sy legioma.
Ireo mpamboly efa za-draharaha dia manoro ny ampahany amin'ny voam-bary. Noho izany dia mitombo ny voankazo vitamin E.
Io zava-manitra io, izay tsy mampiova ny akoho rehetra - melons sy gourds.
Ny votoatin'ny karbidra avo dia hita amin'ny bran. Izy ireo dia ampiana amin'ny foto-tsakafo maina sy fotsy.
Fepetra takatry ny fihinanam-bilona ho an'ny fametrahana boankazo amin'ny vanim-potoana mafana:
cereals - 50g;
fitotoan-tsakafo sy ny fako (vary orza, oats, siramamy) - 50 g;
legioma (carrot, beets, swede) - 30g;
karaoty nopotehina, kalsa - 2g
sakafom-bary sy sakam-boankazo - 2g;
Sakafo, mofo - hatramin'ny 15 g;
latabatra sira - 0,5 g.
Ao an-tokantrano, ny fihinanan-tsokajy dia avy amin'ny fanangonam-bokatra: voamadinika, ahitra, fako, ary vokatra izay atolotra an-tsokosoko: tsaramaso an-trano, yogourt, legioma, legumes, katsaka, voamadilo, ary pastèque. Isaky ny andro, ny vorona dia tokony mahazo karazan-tsakafo.
Ny alikaola na ny koban-kisoa dia azo alaina ho solon'ny tanimbolin'ny tany. Ny safidy tsara indrindra dia ny mikolokolo azy ireo eo amin'ny toeram-pambolinao. Ny tompony dia manome akoho sns. Manankarena proteinina izy ireo.
Ahoana ny hiatrehana ny sakafo? Amin'ny fotoam-piravoravoana, avelao ny zana-tsokosoko ao anaty penina. Ho afaka hanongotra ahitra izy ireo, hahita kankana, lavenona, voangory. Aza hadinoina ny manaparitaka ny atody, ny ahitra vaovao, ny pastèque. Ny fahasamihafana kokoa amin'ny sakafo, ny avo kokoa ny vokatra vokarin'ny soavaly.
Filan-kevitra: vitsy kely na vatoharan-drano no hanampy amin'ny fanatsarana ny famadihana.
Ny famokarana atody ny zana-trondro dia miankina amin'ny hamaroan'ny vorona. Ho ampy ny 150 g ny sakafo isaky ny lay. Tsy afaka ovainao ilay vorona. Ny lanjany loatra koa dia mampihena ny famokarana atody. Ny akohokely, manipy anaty tavin-kena tsy misy - tsy misy tsara.
Ny ankamaroan'ny tompona dia manome sakafo ny vorona amin'ny maraina sy hariva. Raha tsy misy mandeha ny akoho ary mikaroka sakafo samirery, dia omeo sakafo telo isan'andro.
Raha eo anoloan'ny penina lehibe dia azonao atao ny mamahana ny sarin'ny maraina. Amin'ity tranga ity, tokony ho azonao antoka fa manana akany mba hahazoana tombony ao an-toerana ny akoho.
Ny fitsipika fototra - tokony hihinana sakafo amin'ny hatsiaka.
Mba hamokarana ny famokarana atody amin'ny haben'ny avo lenta amin'ny ririnina dia tsy maintsy mikarakara ny alika ianao amin'ny fahavaratra:
mitobia amin'ny sakafo matsiro sy ny ahitra;
fambolena legioma sy karaoty.
Mamindrà fo indroa isan'andro. Aoka ho azo antoka ny sakafo maraina sy hariva.
Amin'ny maraina, avelao ny sakafo mafana mafana:
voa madinika nahandroina,;
tsakafo fonenana, ronono milomano.
Ataovy azo antoka ny mamono vitaminina, ny sakafo matsiro, ny kalsa, ny vovoka, ny sira salohy, ny fofona menaka ho an'ny mash.
Ny Hicksx dia ny vokatry ny fikarohana mpahay siansa. Vakio ny zava-nitranga tamin'ny tranokalanay.
Ao amin'ny tranokalanay dia ahitanao ihany koa ireo karazam-borona tsy dia fahita firy, ohatra, ny akoho Dominikana.
Andraikitry ny hariva:
voamaina maina na voamaina maina miaraka amin'ny sira, varimbazaha, varimbazaha hariva.
Mandritra ny andro dia manome kankana kankana. Aforeto amin'ny ravina karaoke sy ny ahitra eo amin'ny rindrin'ny akoho. Amin'ny ririnina dia misy tsy fahampian-tsakafo vaovao. Ny labiera na ny poketra dia afaka manolo ny sakafo maitso.
Aza hadino ny vitamina. Ny soa lehibe dia mitondra zakiny sy voa avy amin'izy ireo. Azo antoka fa hanome karaoty. Misy karotena izy io, izay manentana ny asa sy ny fahavononana hametraka atody. Ny ovy dia misy tsiranoka. Ao amin'ny vatana ilay akoho dia lasa sikitra izy ary manohana ny fandanjana angovo.
Ny tsy fahampian-tsakafo dia mora hita. Ny akoran'ny atody dia lasa malefaka amin'ny tendrony, malefaka ary marefo. Angamba ianao manana daty kely natokana ho an'ny trondro sakafo, kalsioma na fako. Niparitaka ny tsilo niparitaka nanerana ny vala. Ny akoho dia hihinana izany raha ilaina.
Amin'ny ririnina, ny anjara asan'ny voa voajanahary. Omano mora izany:
Ny vary na ny vary orza dia mangatsiaka anaty rano mafana;
Ao amin'ny efitrano fandroana (manomboka amin'ny 23C ka hatramin'ny 27 C), ny voamaina dia mivoaka ary tohizana izany mba ho mena mandrakariva;
Ny tsimoka dia miseho mandritra ny 3-4 andro;
Manan-karena amin'ny proteinina sy vitamina sakafo efa vonona.
Ahoana ny fampitomboana ny famokarana atody amin'ny ririnina? Manaova sakafo hohanina:
Raiso 30 g ny leviora vaovao sy tsara indrindra. Afafazo amin'ny rano 1 metatra mahery izy ireo. Io vola io dia hanatsara ny vitaminina 1 kg katsaka;
Esory ny masirasira amin'ny rano, manaova aro mosary;
maka ho 9 ora amin'ny hafanana.
Aorian'izany dia ampio tsiranoka amin'ny mash. Ny lohan'ny loha dia halaina 15 ka hatramin'ny 20 g ny sakafo vitaminina.
Famaritana momba ny famokarana sakafo 1 menaka amin'ny ririnina:
voa - 50 g;
ronono, voanio - 100g;
shells, lakaly - 3g;
masomboly katsaka - 7g;
potato voa - 100g;
bone meal - 2g;
harona, hay - 10g;
latabatra sira - 0,5 g;
fotsy mash - 30g.
Raha toa ianao ka manolo-tena mafy amin'ny fikarakarana atody hividianana akoho, dia ianaro ireo toetran'ny fihazonana sy famokarana vorona amin'ny fotoana isan-taona.
Ny tsy fanovana ny fepetra ilaina amin'ny sakafo mandritra ny vanim-potoana mangatsiaka dia matetika mitarika ny famokarana atody. Mamy matetika amin'ny fahavaratra sy be ririnina, sakafo mahavelona, ​​varimbazaha ary vitaminina fanampiny - ny fanalahidin'ny famokarana ambony ny biby fiompinao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ahoana no fomba handaminana ny famatsian-tsoavaly hahazoana vokatra tsara?